Sina SEBIC tanàna 28 mirefy ho an'ny tovovavy bafang mpampandeha bisikileta fanamboarana sy mpanamboatra | Funncycle
Laharana maodely BEF-MG28MF
Crank Set Firn crank arm amin'ny BAFANG
Hub Alloy OLD = 100mm Mount Brake Mount
Gear Set 8speed amin'ny fehikibo Gates
[Rafitra fanidiana Premium]: Rafitra fanaraha-maso volo Hydraulika ety aloha sy aoriana izay misy herinaratra tsy misy tariby; ny rafitra fampiatoana fork aloha sy ny fidorohana ny fikorontanana fatratra dia mampihena ny fikorontanana ary mamaly ny toe-javatra samihafa.
[Môtô mitondra fiara]: Bafang M420 eo afovoan'ny Motor, mahery, mangina ary mitambatra tanteraka, Miaraka amin'ny torolàlana 80Nm faratampony, ny mpitaingina azy dia mifehy tanteraka amin'ny fotoana rehetra ary mankafy ny famaliana tanteraka.
[Fitaovana]: Ny endrin'ny bisikiletan'ny tanànantsika elektrika dia vita amin'ny Alloy Aluminium, maivana, matanjaka ary natao haharitra, manamora ny fivezivezena. Ny sisin'ny alimika vita amin'ny alim-baravarana alimika dia ho an'ny mateza bebe kokoa ary koa mitaingina haingana kokoa tsy dia misintona. Ny fork fampiatoana hery mahery vaika dia mety hampionona ny mpitaingina anao amin'ny dingana manaraka.
Teo aloha: Moto herinaratra SEBIC 28 mirefy 250w 350w 36v 48v bisikileta
Manaraka: SEBIC fivezivezena an-tanàn-dehibe azo atsimbina bisikileta elektrika maivana 16 mirefy